दैनिक राशिफल : २०७७ साल साउन २१ गते बुधबार – सजल सन्देश
दैनिक राशिफल : २०७७ साल साउन २१ गते बुधबार
By Sajal sandesh	 On२० श्रावण २०७७, मंगलवार १३:१८
२०७७ साल साउन २१ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) –समयमा होस नपुग्नाले काम रोकिन सक्छ । अवसरको खोजीमा असाध्यै दौडधुप गर्नुपर्ने दिन छ । फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक अभाव देखा पर्न सक्छ । आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन। धेरै लगानीपछि कममात्र फाइदा हुनेछ । होसियारीसाथ काम लिनुपर्ने समय छ ।
इटहरी पाँच दिनका लागि लकडाउन
कलेजो पिडित ऋषिदेवको सम्पूर्ण उपचार खर्च जीपी फाउन्डेसन झापाले बेहोर्ने